China V-band clamp Emeputa na |lọ ọrụ | Glorex
A na -emechi uzo mgbanaka nke ime ma mezie ya site na usoro pụrụ iche. Ọ nwere ụdị rụrụ mmiri pụrụ iche. Mgbe mgbanaka dị n’esemesia, ọ na-agbakọta ma jikọta iji hụ na sooks ahụ nwere ike ijigide ibe ya n'okpuru nrụpụta na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ ọrụ dịgasị iche iche gbagwojuru anya. Ogologo ndu ma dikwa ogologo.
Akwụkwọ Ọrụ Ahịa:
Na-ede akwụkwọ Stencil ma ọ bụ ihe osise laser.
Igbe katọn na traktọ osisi.
Anyị nwere usoro nyocha zuru ezu na ụkpụrụ ogo siri ike. Ngwaọrụ nyocha dị mma na ndị ọrụ niile bụ aka ọrụ nwere oke nyocha nke onwe. Linelọ ọrụ mmepụta nke ọ bụla nwere ndị ọrụ nyocha ọrụ ha.
Sgbọ mmiri ：
Thelọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ọdụ ụgbọ ala, wee guzobe mmekọrịta dị ogologo oge na nnukwu ụlọ ọrụ lọjistik, ọdụ ụgbọ elu Tianjin, Xingang na Dongjiang, na-enye ohere ibuga ngwongwo gị na adreesị ekwuputara karịa ka ọ bụla.
Mpaghara Ngwa ：
A na-etinyere ya na ntanetị nzacha zuru ezu, injin na-arụ ọrụ dị arọ, usoro turbocharging, sistemu na-arụ ọrụ yana ngwa ọrụ ndị na-achọ njikọ flange (njikọ ngwa ngwa na nchekwa maka flange).
Uru Asọmpi Asambodo:
A na - eji ya ejikọ ọpụpụ nke turbocharger na ọkpọkọ nke ụgbọala. Iji dozie mkpakọ siri ike na-eme ka ibufee oke ma ọ bụ mebie ma ọ bụ nrụgide supercharger.
Nke gara aga: U-nkpachi
Osote: Thedị amị mmiri
Ejiri mpe mpe mpe mpe mpe akwa
Robust mwepu na ahịhịa siri ike